MysticBr-Portal of Mystique-Amaphupha, Imithandazo kunye neeBhafu
I-MysticBr-Isango leMystique-Amaphupha, Imithandazo kunye neeBhafu
Wamkelekile kwi MysticBr! Kule sayithi siza kukunceda ukucacisa intsingiselo yayo yonke into ejikeleze ubomi bakho. Siliqela labantu abazinikele kulwazi kwaye kwiwebhusayithi yethu ungafumana imithandazot ingqiqo yokuphupha ubunayo kwaye wafumana intsingiselo kubomi bakho nge-numerology.
Ngezantsi siza kukukhokela kwiwebhusayithi yethu, kodwa ngaphambi kokuba uqalise ungasebenzisa i-injini yokukhangela engezantsi ukufumana le nto uyikhangelayo:
Ngaba uvuke phakathi ephupheni? Ngaba unexhala lokuba oko kuthetha ntoni? Kweli candelo lokuqala siza kuchaza ukuba kutheni uphupha ngezi zinto kwaye zithetha ukuthini kubomi bakho.
Ukuphupha umntu oswelekileyo kwaye ephupheni uyaphila
phupha malunga nephlegm
ukuphupha ilindle lezinja
Phupha malunga nelindle lomntu
ukuphupha umntu elila
phupha malunga nekofu
iphupha lewebhu yesigcawu
phupha malunga neembotyi
Phupha ngokufa kwakho
phupha malunga nekhandlela
phupha malunga ne-cashew
phupha ngokukhupha iidemon
Ukuba ufuna ukufuna ummangaliso wobuthixo, ungabhenela kule mithandazo ilandelayo, nokuba uzincede ebomini bakho okanye uncede umhlobo/ilungu losapho. Unokubathandazela nabantu abangasekhoyo phakathi kwethu.
Umthandazo uCyprian oyiNgcwele abuyise uthando
Umthandazo wokuba umntu aye kude
Umthandazo kaSt Cyprian wokufumana isityebi
Umthandazo wokwaphula isiqalekiso
Umthandazo wokuba isoka libuye liguqukile
Umthandazo weSaint Cyprian Black Cover
Umthandazo wokuba uThixo achukumise intliziyo yomntu
Umthandazo kaLusifa wokuba azive ezisola
Umthandazo wokwenza indoda ikuphose
Umthandazo wokususa umntu omnye ebomini bomnye
Umthandazo woBugcisa beNgcinga neNtliziyo
Uthandaza ngamandla ukubiza umntu
Umthandazo wokoyisa utshaba
Kwicandelo lokugqibela siza kuthetha malunga neebhafu zokukhulula, ukuba zingasetyenziselwa njani ukuhlambulula umzimba wakho wamandla angalunganga kunye nendlela yokuzilungiselela.
ebomvu rose bath
Ibhafu yesinamoni ukutsala amadoda
Ityuwa emdaka kunye nebhafu yerosemary
I-clove, i-sinamon kunye ne-bay leaf bath
Bath kunye nesinamon kunye noshukela
Ibhafu yetyuwa kunye neswekile
White rose bath ukuvula iindlela
Bath ukuba nomtsalane
Isinamon kunye neClove Bath
ibhafu yetyuwa erhabaxa
indawo yokuhlambela ye-7 yemifuno
Unokusebenzisa ulwazi lwakho lwe-numerology ukwenza intsingiselo yomxholo wobomi bakho ngamanani. Nalu uphononongo lwethu olungcono:
Iiyure eziLinganayo: Intsingiselo Ngokuhambelana ne-Numerology
Iiyure eziGqwethiweyo: Intsingiselo Ngokuhambelana ne-Numerology
Ndandingubani kubomi obudlulileyo ngomhla wokuzalwa
Kwaye kukho isikhokelo sethu sokuhamba! Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungasebenzisa ifom yoqhagamshelwano ukucela ulwazi oluthe kratya okanye usibuze umbuzo.